Ciidan cusub oo maanta tababar looga furay Magaalada Cadaado (Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Ciidan cusub oo maanta tababar looga furay Magaalada Cadaado (Daawo Sawirada)
Madaxweyne ku xigeenka Maamulka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi, ayaa Magaalada Cadaado ee xarunta KMG ee Maamulka Galmudug wuxuu ka furay tababar ay qaadan doonaan ciidamo cusub oo Galmudug ay qoratay.
Ciidamadan tababarka loo furay oo tiradooda ay gaareyso 400 ayaa waxa ay isugu jiraan Rag iyo Dumar, kuwaasi oo laga kala keenay deeganada maamulka Galmudug.
Ciidamadan cusub oo hal ku dhig looga dhigay (Dulmi Diid) ayaa 60 ka mid ah waxa ay yihiin haween, halka inta kalena ay yihiin rag dhalinyaro ah.
Taliyaha Tababarada iyo Qorsheynta Ciidamada Booliska Somaliyed General Dhoore oo ka qaybgalay Munaasabada tababarka loogu furaayay ciidamadan cusub ayaa sheegay in Dowladda Somaliya, gaar ahaan Taliska Booliska uu garab taagan yahay ciidankan cusub ee tababarka loo furay.
Madaxweyne ku xigeenka Maamulka Galmudug oo ka hadlay madasha tababarkaan ayaa bogaadiyay dhalinyarada Haweenka iyo Ragga isugu jira sida ay u doorteen inay ka mid noqdaan Booliska Galmudug.
“Ciidanka Booliska waxaan u sheegaa askarigii anshaxa nidaamka ciidanka aqoonta ku wanaagsanaada in sigaar ah maalintaa oo tababarku xirmaayo loo dalacsiin doono waxaana soo gudbin doona macalimiinta tababarka ciidanka dulmidiid dufcada koowaad degmada Cadaado.” Ayuu yiri Madaxweyne ku xigeenka Galmudug
DHAGEYSO:-Warka Duhur Starfm 30-06-2016